China 100 gsm / 160gsm faiba glaasi ntupu factory na suppliers | Yuniu
Faiba glaasi ntupu bụ faiba glaasi leno ákwà dị ka mkpụrụ, mgbochi-emulsion polima mkpuchi mgbe imikpu, nke nwere ezi alkali eguzogide, mgbanwe na ike ike ọdụdọ ike, ọ ga-eji ọtụtụ na mputa mkpuchi usoro gwụchara usoro (EIFS), ụlọ usoro, mabul, wdg.
Ihe Total arọ (gsm) Ntupu size (mm) Kpaa
Faiba glaasi ntupu 110gsm 4 * 4 pụrụ
Faiba glaasi ntupu Ugbale 6 * 6 pụrụ
1. Ezi nguzogide kemịkal. Ọ na-eguzogide alkali, acid, mmiri, mbuze ciment na mmebi kemịkal ndị ọzọ; ọ nwere ike ijikọ ike na resin ma dị mfe soluble na styrene.
2. Ike dị elu, modulus dị elu na ịdị arọ.
3. Better akụkụ kwụsie ike, ike, ewepụghị, adịghị mfe ịda mbà, nrụrụ na ọnọdụ.
4. Nguzogide mmetụta dị mma. (N'ihi ike ya na ike ya)
5. Mgbochi-ọgwụ na ụmụ ahụhụ.
6. Mgbochi ọkụ, nchekwa okpomọkụ, mkpuchi ụda na mkpuchi mkpuchi.
1) Wall mkwado ihe (dị ka faiba glaasi mgbidi ntupu, GRC wallboard, EPS esịtidem mgbidi mkpuchi osisi, gypsum osisi, wdg)
2) Ọfụma ngwaahịa ngwaahịa (dị ka ogidi ndị Rom, flues, wdg).
4) Waterproof akpụkpọ ahụ akwa na korota ụlọ waterproofing.
5) Mee ka ọkpụkpụ nke plastik na roba sie ike.
6) Fireproof osisi.
7) Akwa ala nke egweri wiil.
Faiba glaasi ntupu na-na-ọbọp ke polyethylene akpa, na mgbe 4 na-apụta na-juru n'ọnụ n'ime a kwesịrị ekwesị corrugated igbe. Ejiri 20-foot nke ọkọlọtọ nwere ike jupụta n'ihe dị ka 70,000 m2 nke ntanye faiba glaasi, na 40 ụkwụ ụkwụ nwere ike jupụta n'ihe dịka 150,000 m2 nke ntanye fegasi.
Gbọ njem: oké osimiri ma ọ bụ ikuku
Nzipu ozi: 15-20 ụbọchị mgbe na-anata tupu ugwo
Nke gara aga: Okpomọkụ na-eguzogide Glass eriri kpara Roving na elu mma
Osote: Mass Production AR glass fiber chopped strands
Okpomọkụ na-eguzogide Glass eriri kpara Roving na hi ...